Vhidhiyo Email: Inguva Yekutengesa Kuti Uwane Wako | Martech Zone
Muvhuro, March 23, 2020 China, December 30, 2021 Douglas Karr
Nedambudziko re COVID-19, kugona kwevatengesi vekunze zvikwata kuchengetedza hukama hwepamoyo netarisiro yavo nevatengi zvakabviswa nehusiku. Ndiri mutendi akasimba kuti kukwazisana chinhu chakakosha kune yekutengesa maitiro, kunyanya nekubatana kukuru. Vanhu vanofanirwa kukwanisa kutarisana mumaziso uye kuverenga mutauro wemuviri kuti vawane kuvimba mukudyara kwavari kuita uye mudiwa wavari kusarudza.
Kuomesa zvinhu, ramangwana rehupfumi hwedu riri mubvunzo. Nekuda kweizvozvo, zvikwata zvekutengesa zviri kunetseka kuvhara madhiri… kana kutowana makambani kuti apindure. Ndiri kushanda mukutanga izvozvi nemazana ezviuru zvemadhora anga akasimba mupombi ... uye dhiri redu rekutanga rasundira kumashure zuva racho. Tichifunga kuti isu tinobatsira makambani neotomation uye kusangana, inguva yakaoma kubva tinoziva kuti tinogona kuvabatsira.
Vhidhiyo yeMapuratifomu Ekutengesa
Izvo zvakati, tiri kuita vhidhiyo email mhinduro kubatsira zvikwata zvedu zvekutengesa nekuvandudza kuita kwavo netarisiro uye vatengi zvakafanana. Vhidhiyo haifananidzi ne-mu-munhu, asi inopa mukana unoita wekutaura wega kune anotarisira kana mutengi.
Vhidhiyo yemapuratifomu ekutengesa ane zvimwe zvinozivikanwa maficha:
rekodhi - rekodha mavhidhiyo akasarudzika kuburikidza nedesktop, browser yebrowser, kana nharembozha.
CRM Kubatanidzwa - nyora email kune inotungamira, kubata, account, mukana, kana kesi.
Enhancement - gadzirisa mavhidhiyo uye wedzera zvakapetwa uye mafirita.
Alerts - tarisa chaiyo-nguva vhidhiyo kusangana uye gamuchira chenjedzo.
Pages - kumhara peji kubatanidzwa kuti utarise uye kupindura vhidhiyo. Vamwe vanotova nechalendari yekubatanidzwa pakuronga nguva dzekugadzwa.
ripoti - kuyera kubudirira netsika Reports uye Dashboards.
Heano mapuratifomu anozivikanwa.
BombBomb - Kurumidza uye nyore kunyora, kutumira, uye kuteedzera vhidhiyo maemail kuti abude mune ako tarisiro ', vatengi' uye vashandi 'inbox.
Vadivelu Comedy Covideo - Rekodha uye utumire akasarudzika mavhidhiyo anovandudza mhinduro, kuwedzera mikana yekutengesa uye kuvhara mamwe madhiri
Dubb - Kura bhizinesi rako riite mapeji emavhidhiyo anogona kutumirwa chero kupi nekufanoonekwa kweGIF.
Loom - Kutumira Loom kunoshanda kupfuura typing maemail marefu kana kushandisa zuva rako mumisangano uine hurukuro dzisingade kuti dziitike mune chaiyo-nguva.
OneMob - Kurumidza gadzira mapeji ezvinyorwa ku Vanoita tarisiro, vatengi, vadyidzani uye vashandi
vidREACH - vidREACH ndeye yakasarudzika vhidhiyo email uye yekutengesa yekudyidzana chikuva iyo inobatsira mabhizinesi kuita vateereri vavo, kuunza mune yakawanda inotungamira uye kuvhara mamwe madhiri.
Vhidhiyo yeMakambani Ekutengesa
Inbox yemunhu wese yakaunganidzwa kumusoro izvozvi uye vanhu vari kuwana nguva yakaoma kusefa izvo zvinhu zvinogona chaizvo kupa kukosha kubasa kwavo. Heano kuraira kwangu pachako pakushandisa vhidhiyo yekutengesa:
Nyaya Yenyaya - Isa Video mune yako mutsara mutsara pamwe nehunhu hwaunounza.
Iva Muchidimbu - Usatambise nguva yevanhu. Dzidzira izvo zvauchazotaura uye svika wakananga kunongedzo.
Govera Rubatsiro - Ipa mukana kune wako wekutarisira kana mutengi kutevedzera.
midziyo - Shandisa yakanaka kamera kamera uye maikorofoni. Kana iwe usina maikorofoni yakanaka, mahedhifoni anowanzo shanda.
Mobile Vhidhiyo - Kana iwe ukanyora kuburikidza nharembozha, edza kurekodha mumamiriro emamiriro ekunze sezvo vanhu vari kuzovhura izvi muemail yavo, pamwe padesktop kana vari kuhofisi yekumba kwavo.
Kupfeka kweKubudirira - Sweats uye yoga bhurugwa inogona kunge iri yakanakisa yekumba zvipfeko zvemuhofisi, asi kuti ubudise chivimbo, inguva yekugeza, kuveura, uye kupfeka kuti ubudirire. Izvo zvinoita kuti iwe unzwe uine chivimbo zvakanyanya uye wako anogamuchira achawana iwo akanyanya fafitowo zvakare.
kumashure - Usamira pamberi pemadziro machena. Hofisi ine humwe hudzamu uye inodziya mavara kumashure kwako ichave yakanyanya kukoka.
kuburitsa: Ndiri kushandisa chinongedzo chekubatana kune mamwe maturusi ari muchinyorwa chino.
Tags: BombBombcrm kusanganaonemobvhidhiyo yekutengesavhidhiyo yezvikwata zvekutengesavhidhiyo mune emailKubatanidzwa kweYouTube